wararka maanta-arlaadii.net » War Murtiyeed laga soo saaray Shirkii Amniga Muqdisho
Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta Xukuumadda Soomaaliya Cabiraxmaan Cumar Cismaan Yariisoow ayaa sheegay in Dowladda Soomaaliya lagu amanay sida ay u hirgalisay Qodobadii ugu Muhiimsanaa ee kasoo Baxay shirkii london oo ay kamid ahayd isku dhafka Ciidamadda Dowladda iyo kuwa Maamul Goboleedyadda.
Ka Qayb galeyaasha Shirka Amniga Soomaaliya aya waxaa ay ku Hisiiyeen Sadax Qodob oo Mudan inlasiiyo Mudnaanta Koowaad, sadaxdaas Qodob aya u Qornaa sida tan
1.In la fuliyo Istiraatiijiyadda Amniga Qaranka.
2.In si deg-deg ah loo horumariyo Qorshaha kala guurka oo kusaleysan Waqti Cad si Masuuliyadda Amniga looga Wareejiyo Ciidamadda AMISOM looguna wareejiyo Ciidamadda Qaranka Soomaaliyeed.
3.In la siiwado Taageeradda Beesha Caalamka si loo dhiso Awooda ciidamadda Qaranka Soomaaliyeed.
Qeybta labaad ee shirka oo maanta ka socda Muqdisho ayaa diiradda lagu saaraya arimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda halka shalayna laga hadlay oo kaliya arimaha Ciidanka iyo amaanka Soomaaliya
Puntland oo Shaacisay In Itoobiya ay la wareegtay Dhul ku yaalo Mudug